TOROHEVITRA ARAKA NY LALÀNA
Efa ho zato taona toy inona no antsoina hoe zava-mahadomelina dia nivadika ho global-dalàna ity. Ny toe-javatra ara-tsosialy, ara-pahasalamana, ara-kolontsaina, lasa foto-kevitra ny solombavambahoaka, ny fampiharana ny lalàna, ny fitsarana sy ny olana ara-dalàna.
Amin’ny maha-ara-dalàna ny zava-mahadomelina olana ny olona miasa ao amin’ny isan-karazany ny toe-javatra. Rehefa tsaboina izy ireo na hanafoanana ny fanaintainana.
Rehefa manana ny mahafinaritra
Rehefa mijaly noho ny fiankinan-doha. Na fangorahana manoloana ny fijaliana havan-tiany mpijery ny fanjaitra.
Raha tsy mahazo fanampiana amin’ny toeram-pitsaboana
Na aseho rongony ravina eo amin’ny tava.
Ary koa, raha izy ireo ny maso mba hitafy ny tany amin’ny boîte de nuit, naniraka ho an’ny fandinihana, nalaina avy amin’ny paosy na iza ny fonosam vovoka fotsy, nataony tao amin’ny fitsarana, dia nandà ny fitsaboana ara-pahasalamana, tsy manana ny ray aman-dreny ny zon’olombelona, very ny asa.
Ny olona hahita ny lalàna, na ny tsy fanarahan-dalàna. Tra-boina ny tsininy ny lalàna na ny efa nivadika ny fampiasana.
Vohikala ity dia nitoe-jaza toy ny tsipika zavatra zon’olombelona fanampiana. Ny andraikitrareo dia ny hanome toro-hevitra, mba hampianatra ny fiarovana ny teknolojia, milaza ny marina ny dingana mba hampiseho ny fomba lalàna afaka miasa, mba hijery ny fanantenana. Isika miaro ny zon’olombelona, ny fahalalahana ara-dalàna sy mahaliana ny olona tsirairay, tarihin’ny ny lalàm-Panorenana, ny fitsipika sy ny fenitra amin’ny lalàna iraisam-pirenena
Inona no ny Trosa ny Fanarenana